MAAYLAND IYO MILATARIGA FEDERAALKA MAANTA LAAKIIN!! | SMC
Home WARARKA MAANTA MAAYLAND IYO MILATARIGA FEDERAALKA MAANTA LAAKIIN!!
MAAYLAND IYO MILATARIGA FEDERAALKA MAANTA LAAKIIN!!
5-TA QAYBOOD DALKA KA JIRA MAANTA
Taliyaha qaybta 21-aad fadhigeedu yahay Jeneraal Dhuusamareeb Galmudug Jeneraal Qooje Dagaari u dhashay Salballaar waa la dilay waxaa haatan ku sime ka ah Jeneraal Mascuud u dhashay Salballaar.
Taliyaha qaybta 27-aad Fadhigeedu yahay Hiilwayne kana hawlgasha Hirshabelle Jeneraal Axmed Maxamed Tareedisho u dhashay Salballaar.
Taliyaha qaybta 12-ka April fadhigeedu yahay Damaanyo Muqdisho JBM kana hawlgasha Shabeellaha-Hoose JBM Jeneraal Tawane u dhashay Salballaar.
Taliyaha qaybta 43-aad fadhigeedu yahay Jubbooyinka JBM Jeneraal Sanka u dhashay Saldheer.
Taliyaha qaybta 60-Maad fadhigeedu yahay Baydhabo kana hawlgasha gobolladda Bakool, SHabeellaha-Hoose iyo Baay JBM Jeneraal Maxamed Shiikh Cabdullaahi Ciirow.
TALIYEYAASHA NUUCYADA CIIDANKA MILATARIGA FEDERAALKA SOOMAALIYA.
Taliyaha ciidanka Xoogga Salballaar.
Taliye kuxigeenka ciidanka Xoogga Maayland.
Taliyaha ciidanka Lugta Saldheer.
Taliyaha ciidanka Cirka Salballaar.
Taliyaha ciidanka Badda Saldheer.
HOGGAANADA TALISKA GUUD CIIDNKA XOOGGA DALKA FEDERALKA SOOMAALIYA.
Hoggaanka maamulka lacagta Salballaar.
Hoggaanka hantidhawrka Salballaar.
Hoggaanka hawlgalinta ahna kusime Salballaar.
Hoggaanka gaadiidka Salballaar.
Hoggaanka war-isgaarsiinta Salballaar.
Hoggaanka Wardoonka Salballaar.
Hoggaanka Caafimaadka Salballaar.
Hoggaanka Hubka iyo rasaasta Salballaar.
Hoggaanka Saadka Salballaar.
Hoggaanka Sancada Saldheer.
Hoggaanka wacyigelinta Saldheer.
Hoggaanka Dhismaha Saldheer.
Hoggaanka ciidanka Saldheer.
Hoggaanka sahanka Saldheer.
Hoggaanka Tababarka Somaliland.
Hoggaanka Xiriirka Dibadda Maayland.
KULYADAHA IYO DUGSIYDA TABABARADA CIIDANKA XOOGGA DALKA FEDERAALKA SOOMAALIYA.
Taliyaha kulyadda Turksom Saldheer
Taliyaha Kulyadda Jaalle Siyaad Salballaar.
Taliyaha dugsiga tababarada Jeneraal Dhegabadan Salballaar.
Taliyaha dugsiga tababarada Hiilwayne Salballaar.
Taliyaha dugsiga Ay-Furugow (Ballidoogle) Salballaar
Taliyaha kulyadda Jeneraal Goordon Somaliland.
GUUTOOYINKA MADAXABANAAN MILATARIGA DALKA FEDERAALKA SOOMAALIYA.
Taliyaha guutada 16-aad Danab Salballaar.
Taliye kuxigeenka guutada 16-aad Danab Salballaar.
Taliyaha guutada 14-ka Oktoobar Saldheer.
Taliye kuxigeenka guutada 14-ka Oktoobar Salballaar.
Taliyaha guutada Gorgor Saldheer.
Taliyaha guutada 60-naad ilaalada Villa Somalia Somaliland.
URURADA MADAXABANAAN MILATARIGA DALKA FEDERAALKA SOOMAALIYA.
Taliyaha ururka 38-aad taliska guud Salballaar.
Taliye kuxigeenka ururka 38-aad taliska guud Saldheer.
Taliyaha ururka 89-aad Saadka Salballaar.
Taliyaha ururka 59-aad Gaadiidka Salballaar.
Taliyaha ururka 32-aad Sancada Saldheer.
Taliyaha ururka 4-aad Danab Saldheer.
Taliyaha ururka Caafimaadka Salballaar.
Taliyaha ururka 37-aad Gaashaandhigga Salballaar.
GUUTADA 7-AAD FADHIDA MIN AFGOOYE ILAA WANLAWAYN GOBOLKA SHABEELLAHA-HOOSE JBM.
Taliyaha guutada 7-aad ee qaybta 60-maad Gaashaanle Dhexe Axmed Gaashaan u dhashay Salballaar
Abaanduulaha guutada 7-aad qaybta 60-maad Gaashaanle Dhexe Salaad Fiiqow u dhashay Salballaar.
Taliyaha ururka 64-aad fadhiya Afgooye JBM guutada 7-aad
2-Xiddigle Cabdirisaaq Ilasaamaaw u dhashay Saldheer.
Taliyaha ururka 35-aad fadhiya Garasbandiire JBM guutada
7-aad Gaashaanle Maxamed Cabdulle Caraaye (Foor-Foor) u dhashay Salballaar.
Taliyaha ururka 54-aad fadhiya Wasma-Xun JBM guutada 7-aad 2-Xiddigle Cali Cabdullaahi (Halac) u dhashay Salballaar.
GUUTADA 6-AAD FADHIDA MIN BARAAWE ILAA LAANTA-BUURO GGOBOLKA SHABEELLAHA-HOOSE JBM.
Taliyaha guutada 6-aad ee qaybta 60-maad Jeneraal Aadan Laba-Afle u dhashay Salballaar.
Abaanduulaha guutada 6-aad qaybta 60-maad Gaashaanle sare u dhashay Salballaar.
Taliyaha ururka 18-aad fadhiya Laanta-Buuro JBM Gaashaanle dhexe Liibaan Yuusuf Garre (Liibaan Goobaanle, ama, Liibaan Dhamaaq) u dhashay Salballaar.
Taliyaha ururka fadhiya Shalambood JBM Gaashaanle Cabdi Salaad u dhahay Salballaar.
Taliyaha ururka 25-aad fadhiya caasimadda Baraawe JBM Gaashaanle Cabdiraxmaan Cilmi Jimcaale u dhashay Salballaar.
GUUTADA 14-KA OKTOOBAR MILATARIGA DALKA FEDERAALKA SOOMAALIYA FADHIDA MIN SABIID IYO CAANOOLE ILAA MARKA XARUNTA GOBOLKA SHABEELLAHA-HOOSE JBM.
Taliyaha guutada 14-ka Oktoobar Gashaanle sare Warsame Maxamed Diiriye u dhashay Saldheer.
Abaanduulaha guutada 14-ka Oktoobar Gaashaanle Dhexe Cabdi Cali Raage u dhashay Salballaar.
Taliyaha ururka 66-aad fadhiya Awdheegle guutada 14-ka Oktoobar Gaashaanle Maslax u dhashay Saldheer.
Taliyaha ururka 143-aad fadhiya Bariire JBM guutada 14-ka Oktoobar 3-Xiddigle Axmed Siyaad u dhashay Salballaar.
Taliyaha ururka 53-aad fadhiya Sabiid iyo Caanoole guutada 14-ka Oktoobar Kabtan u dhashay Salballaar.
Taliyaha ururka 84-aad fadhiya Baydhabo2 JBM guutada 14-ka Oktoobar 3-Xiddigle Cali Tigree u dhashay Saldheer.
Taliyaha ururka 14-ka Oktoobar fadhiya Marka JBM guutada 14-ka Oktaabar Dhamme Cusmaan Muuse u dhashay Maayland.
Taliyaha ururka 83-aad fadhiya Baydhabo2 JBM guutada 14-ka Oktoobar Gaashaanle Maxamed Nuur u dhashay Maayland. GUUTADA 1-AAD EE QAYBTA 12-KA APRIL KA HAWGASHA AAGGA CEEL-SALIINI GOBOLKA SHABEELLAH-HOOSE JBM.
Taliyaha guutada 1-aad qaybta 12-ka April Gaashaanle sare Xasan Jaamici u dhashay Salballaar.
Abaanduulaha guutada 1-aad ee qaybta 12-ka April Gaashaanle sare Qataatow u dhashay Salballaar.
Taliyaha ururka 31-aad ee guutada 1-aad qaybta 12-ka April Gaashaanle Dhexe Hurdaaye u dhashay Salballaar.
DALLAACADAHA SARAAKIISHA MILATARIGA DALKA FEDERAALKA SOOMAALIYA.
Salballaar 70 sarkaal.
Saldheer 34 sarkaal.
Maayland 13 sarkaal.
4, Somaliland 6 sarkaal.
Beesha-Shanaad 2 sarkaal.
QAAR KA MID AH 14-KA SARAAKIISHII UGU DAMBAYSAY REER MAAYLAND LA BUUSAY.
Taliyihii horinta 2-aad ururka 83-aad guutada 14-ka Oktoobar Xiddigle Cali Aadan Shigshigow.
Taliyihii horinta ururka 84-aad guutada 14-ka Oktoobar Xiddigle Xasan Cabdishakuur.
Taliyihii hawlgalinta ururka 83-aad guutada 14-ka Oktaabar Xiddigle Roobow Cali Aadan.
Taliyihii horinta ururka 84-aad guutada 14-ka Oktoobar Xiddigle Cabdullaahi Bidhi.
Taliyihii horinta 3-aad ururka 83-aad guutada 14-ka Oktoobar Xiddigle Cali Warsame Caddaala.
Taliyihii Saadka guud ururka 83-aad guutada 14-ka Oktoobar Xiddigle Cabdifitaax Maxamed.
Taliyihii hubka iyo rasaasta ururka 84-aad guutada 14-ka Oktoobar Xiddigle Madmad
Taliyihii horinta ururka 84-aad guutada 14-ka Oktoobar Isbatoore Maxamed Cabdiraxmaan.
SARAAKIISHAN REER MAAYLAND HOOS KU XUSAN BADDAL IYO XARIG AYAA LA ISUGU DARAY.
Xiddigle Cali Aadan Xasan.
Xiddigle Aadan Beeso
Isbatoore Cali Towfiiq
Xiddigle Roobow Cali Aadana isago qaranka daacadnimo u daafacaaya ayaa hubka iyo rasaasta qaranka aan dhacno Salballaar ay ku tiri uu diiday darteed shalay askarta hortood loogu bahdalay Odawaana ushiisa uu ku garaacay sidii dameer beer daaqay oo kale, into fig loo xiray ayaana isago jeebbaysan baabuurka uu Odawaa wato boosakaanaha uu gashtay meesha eeyga lagu xabbiso.
Miidaame dhega maleh hadduu malag dhawaaqana amar Alle laakiin!!
By. Adam Increase
Next articleFaah Faahin laga helaayo Qarax lugu hoobtey oo ka dhacay Degmada Jilib.